Fifaninanana eran-tany robotique : manohana ny ekipa malagasy ny Airtel Madagascar | NewsMada
Fifaninanana eran-tany robotique : manohana ny ekipa malagasy ny Airtel Madagascar
Andrasana amin’ny “First Global Challenge” (FGC), andiany faha-2 Firenena 175, hatao any Mexico, ny 15 hatramin’ny 18 aogositra 2018. Tanora malagasy dimy ny handray anjara hifaninana amin’ny “International de robotique” amin’io FGC io. Handresen-dahatra ny tanora rehetra avy amin’ny vazan-tany efatra izany, hanaporofoana ny fahaiza-manao momba ny angovo azo havaozina, hametrahana fampandrosoana maharitra. Koa nanome toky ny Airtel Madagascar fa hanohana ireo tanora malagasy ireo amin’izany fifaninanana iraisam-pirenena izany.
Hiantohan’ny Airtel Madagascar ny saran-dalana sy ny fampitaovana rehetra hanatanterahana ny tetikasa. « Na fitaovana tsotra aza ny robot, hahazoana manatsara fari-piainana, hahafahana mamokatra, ary miasa ho an’ny fampandrosoana maharitra. Betsaka ny singa avy amin’izany manafaingana ny fampandrosoana ny toekarena eto Madagasikara », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel Madagascar, i Maixent Bekangba.
Mpiara-miombon’antoka ny Airtel amin’ny lafiny nomerika, efa nanohana ny ekipa malagasy tamin’ny « Africa App Challenge », ny taona 2017, fifaninanana amin’ny fampiasana finday nampanaovin’ny Samsung sy ny Singapour Télécom. Nitana ny laharana fahatelo tamin’io fifaninanana io Rafaritra Kevin.
“Fanamby lehibe maneran-tany aroso hifaninanan’ny tanora hitadiavana vahaolana ny famatsiana angovo, ny rano, ny fitsaboana, ny fanabeazana, ny fiarovana, ny ady amin’ny tsy fahampian-tsakafo. Entanina izy ireo hiara-hiasa ho tombontsoan’ny rehetra eo anivon’ny fiarahamonina », hoy i Sahaza Marline, ao amin’ny ONG Habaka, tamin’ireo ekipa malagasy.